Siselo esinxilisayo – Wazi njani xa kukho ingxaki? - Christian Literature Fund
By CLF	All, Pamphlets, Social Issues XHO165
Ingxaki yokusela ithetha ukuthini?
Umntu kungathiwa unengxaki yokusela xa oko kusela kwakhe kuphazamisa umsebenzi wakhe, imicimbi yezezimali, impilo okanye ubudlelwane nabanye abantu. Ngaphezu koko, umntu onjalo ngamanye amaxesha uza kuzama ukuthoba isantya sokusela, okanye ayeke okwethutyana, kodwa aphinde aphindele kundalashe.
Le nto ingajongeka ngathi ilula, kodwa kumntu onjengalo oselayo izinto azilulanga olo hlobo.
Kumntu onengxaki yokusela (maxawambi abo bamngqongileyo) kunzima ukuyibona into eyenzekayo kanye kanye kunye nobunzulu bale ngxaki.
Kufuneka uvule amehlo ujonge iimpawu ezithile: Phendula le mibuzo ilandelayo ngokunyanisekileyo:
Uyifumana inzima into yokuyeka ukusela wakuba nje uqalile?
Uvamile ukwenza izinto ezihlungisayo okanye ukudala umsindo kwabo bakungqongileyo?
Iyenzeka kakhulu mhlawumbi into yokuba unxile kwindawo engafanelekanga nangexesha elingafanelekanga noxa ubungazimiselanga okokuba loo nto yenzeke?
Ukusela kwakho kwenza uxambulisane nomlingane wakho, umhlobo okanye undofanaye?
Ukhe uvuke ungazikhumbuli izinto ezenzeke kubusuku obudluleyo xa ubukhe wabuselarha?
Ngaba maxawambi ukhe usele unebhabhalaza ukwenzela ukuqabula emva kokusela kakhulu?
Ukhe ungayi emsebenzini ngenxa yokusela kwakho okanye ube neengxaki emsebenzini ngenxa yokusela kwakho?
Ukhe uxoke ngokuba lapho ukhoyo, ngokuba usele kangakanani na nangemeko yakho yezezimali ngenxa yokunxila kwakho?
Ukhe wagqiba kwelokuyeka ukusela kodwa waphinda waqalisa emva kweeveki okanye iinyanga ezimbalwa?
Kukho umntu (undofanaye, isizalwane, ugqirha, umqeshi) okhe wathi kuwe musa ukusela kakhulu?
Okokuba uthe ewe kumibuzo emithathu nayiphi na kule ingentla kungenzeka unengxaki yokusela.
Okokuba uthe ewe kwimibuzo engaphezu kwesithathu kukho ingxaki enkulu.
Kuza kwenzeka ntoni okokuba ndinengxaki yokusela kodwa ndigqibe kwelokuba akukho nto ndiza kuyenza ngaloo nto?
Akukho mntu unokukunyanzela okokuba uyeke ukusela.
Abo bakungqongileyo kuza kunyanzeleka benze isigqibo sokuba bayaneliseka na ukuhlala nawe nengxaki yakho yokusela. Kungenjalo bagqibe kwelokuba ngaba bafuna kubekho inguqu ngoncedo lukanontlalontle okanye omnye umntu oyeleleyo apho ngokwemfundo.
Njengabanye abantu, kunokwenzeka uyako-nwabela ukuziselela kancinci nje ngamaxesha athile. Ikakhulu ngeempela-veki, maxawambi xa kukho isihlo esisodwa okanye uziselele wedwa nje maxawambi.
Kusenokwenzeka maxawambi usele kakhulu, wenze okanye uthethe izinto ezino-kubakhubekisa abanye abantu, uzisole ethubeni. Kodwa ke, njengoninzi lwabantu abaselayo mhlawumbi ucinga ukuba ukusela kwakho akuyongxaki. Kaloku ucinga ngolu hlobo lulandelayo:
Andiseli yonke imihla. Ndingazihlalela ndingaseli.
Zange ndikhe ndibe nengcangcazela okanye isithuthwane ngenxa yokusela.
Andiziseli iziselo eziqatha ezifana nebhranti newiski. Ndisela iwayin nebhiya kuphela.
Andiqali ngakusela kusasa.
Kanti ke ungamangali kunokwenzeka usenayo ingxaki yokusela nokokuba na ezi zinto zibaliweyo ngentla apha zange uzenze okanye zikuhlele.
Phofu ke ngokuya uqhubeka usela:
Impikisano iza kwanda nabo bakungqongileyo
Uza kuya ugula ziingxaki zesisu, ukunyuka kokubetha kwegazi emzimbeni (ihayihayi), ukonakala kwesibindi sakho, njalo njalo.
Isidima sakho siza kuhla, yaye uza kudibana usele nabantu ongazange waba nonxibelelwano nabo ngaphambili.
Iingxaki zakho zezimali ziza kunyuka.
Uza kufumanisa into yokuba abantu baya bekubukula ngokubukula.
Okokuba ndinolwazi ndingathini?
Abantu abaninzi iyabanzimela into yokuvuma ukuba banengxaki yokusela. Basenokucinga oku kulandelayo:
Baza kuthini abantu xa ndiyofuna uncedo?
Abo bakukhathaleleyo ngokwenene baza kuvuya. Ngabahlobo bakho osela nabo kuphela abaza kothuka.
Ndiza kuthunyelwa kwiziko elithile.
Asingabo bonke abantu abafuna ukukhathalelwa kwiziko elithile. Kumaxa amaninzi umntu angancedwa ngokulandela inkqubo yezigulana ezinyangwa zizihlalela ekhaya. I-Ofisi ye-SANCA inceda apho. Unontlalontle uza kukunceda ngolona hlobo lokukunyanga olulungileyo.
Kubiza imali eninzi!
Ukufumana uncedo akubizi kangangoko ucinga. Abaqeshi abaninzi bayavuma ukunceda abasebenzi abazimiseleyo ukuba bafumane unyango.
Khumbula ukuba okokuba nyhani AKUFUNI kwenza nto ngengxaki yakho yokusela, kulula ukufumana izizathu zonkungayenzi loo nto. Izizathu ziyintarha-ntarha.
Xa kunjalo ke, uncedo ndilufumana phi?
ISebe ezeNtlalontle ……………………………….0800 220 250
Amapolisa………………………………………………..0860 010 111
Isixeko saseKapa ……………………………………..0800 435 748
SANCA (WC) Bellville ………………………………..021 945 4080
Badisa …………………………………………………….021 957 7130
CAD ……………………………………………………….021 930 4472
Kukho into ekufuneka ndiyenze ngoku kusela kwam?
Zibuze lo mbuzo Ndingayeka kodwa andifuni
Okanye Ndiyafuna ukuyeka kodwa andikwazi?
Musani ukuba zizidenge ke; nina zamani ukuqonda ukuthanda kwenkosi. Musani ukunxila butywala obunonaakalisayo. Ndaweni yaloo nto phuphumani ngumoya oyiNgcwele. (Kwabase-Efese 5 :17-18)